Danjire Afey oo ka digay in la hor istaago dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe – STAR FM SOMALIA
Wakiilka Urur Goboledka IGAD u qaabilsan Arimaha Somaliya Danjire Maxamed Cabdi Afey ayaa ka digay in is hor istaag lagu sameeyo Dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe oo lagu wado in Todobaadka soo socda uu dib kaga furmo Magaalada Jowhar ee xarunta Gobolkaasi.
Maxamed Cabdi Afey oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inay jeedinayaan digniintaasi ku aadan isku day kasta oo lagu doonaayo in is hor istaag loogu sameeyo Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.
Wakiilka IGAD ee arimaha Somaliya ayaa sidoo kale sheegay horumarka dadka dega Gobolada Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe inay ku jirto inay dhistaan Maamulka islamarkaana arintaasi ay u istaagaan si ay wax ula qaybsadaan Maamulada kale ee dalka ka dhisan.
“Si shacabka labada Gobol ay ku helaan Nabadgelyo waxaa noo muuqata in la de dejiyo nidaamka Maamulka, Gobol kasta oo dhismaayo meesha kaliya ee hartay ee muuqata inay dib u dhaceyso waa labadan Gobol dhanka ammaanka, wixii dhaqaalo iyo horumar ah oo soo geli lahaa labadan Gobol nidaam la’aan ayeey uga baaqanaysaa yaanan laga soo horjeesan nidaamka socda.” Ayuu yiri Danjire Afey.
Danjire Afey ayaa shalay shaaciyay maalinta Sabtida oo Bisha ay tahay 3 in Ergooyinka daneynaya Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe la isugu yeeraayo Magaalada Jowhar si ay u wada hadlaan wixii ay tabanayaan.
Maamulka Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe ayaa noqday caqabad ku hor gudban Dowladda Federalka Somaliya, xilli maamuladii kale ee dalka laga dhisi lahaa Dowladda ay soo dhistay.